Accountant Assistant | GBG Industrial Company Limited ﻿
9.10.2019, Full time , Food & Beverages / Catering
Company: GBG Industrial Company Limited
GBG Industrial Company Limited သည် ယမကာလောကတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် အရောင်းရဆုံး No. 1 ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေး ကောင်းမွန်၍ စစ်မှန်သောပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် အဖျော်ယမကာများကို စေတနာရှေ့ထားကာ Customer များ စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု့များဖြင့် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်သော ဘဝများကို ပေးနေပါသည်။
GBG Industrial Company Limited သည္ ယမကာေလာကတြင္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အေရာင္းရဆုံး No. 1 ျဖစ္သည္။
အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္၍ စစ္မွန္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေစတနာေရွ႕ထားကာ Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈ႕မ်ားျဖင့္ ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘဝမ်ားကို ေပးေနပါသည္။(Unicode)
GBG Industrial Company Limited သည် A1 ရှန်ပိန် ၊ မန်းရှယ် မန်ကျည်းအရက်နှင့် GBE အရက်သန့် တို့ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိသော Beverage Company တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
GBG Industrial Company Limited သည္ A1 ရွန္ပိန္ ၊ မန္းရွယ္ မန္က်ည္းအရက္ႏွင့္ GBE အရက္သန႔္ တို႔ကို ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေသာ Beverage Company တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။
Work location အမှတ်(၁၉၅) ၊ ရေဇလာလမ်း ၊ စက်မှုလက်မှု (င) ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်။
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ •	မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်နှင့်အနီးတဝိုက်နေထိုင်သူကိုဦးစားပေးမည်။
(Unicode) Vision GBG Industrial Company Limited သည် ယမကာလောကတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် အရောင်းရဆုံး No. 1 ဖြစ်သည်။ Mission အရည်အသွေး ကောင်းမွန်၍ စစ်မှန်သောပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် အဖျော်ယမကာများကို စေတနာရှေ့ထားကာ Customer များ စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု့များဖြင့် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်သော ဘဝများကို ပေးနေပါသည်။ (Zawgyi) Vision GBG Industrial Company Limited သည္ ယမကာေလာကတြင္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အေရာင္းရဆုံး No. 1 ျဖစ္သည္။ Mission အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္၍ စစ္မွန္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေစတနာေရွ႕ထားကာ Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈ႕မ်ားျဖင့္ ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘဝမ်ားကို ေပးေနပါသည္။
(Unicode) GBG Industrial Company Limited သည် A1 ရှန်ပိန် ၊ မန်းရှယ် မန်ကျည်းအရက်နှင့် GBE အရက်သန့် တို့ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိသော Beverage Company တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ (Zawgyi) GBG Industrial Company Limited သည္ A1 ရွန္ပိန္ ၊ မန္းရွယ္ မန္က်ည္းအရက္ႏွင့္ GBE အရက္သန႔္ တို႔ကို ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေသာ Beverage Company တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးလု်ပငန်းချိန်အတွင်း အရက် ၊ ဆေးလိပ် ၊ ကွမ်း ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူကိုဦးစားပေးမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိလာပါကခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Accountant Assistant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon GBG Industrial Company Limited Accountancy Jobs Accountancy Jobs Service Jobs in Myanmar, jobs in Yangon